UJohn Hancock, i-Inshurensi yoBomi bokuQala ukuHambisa iApple yeWatch kwiSaphulelo esiBalulekileyo | Ndisuka mac
UJohn Hancock, i-inshurensi yokuqala yobomi yokuhambisa iApple Watch ngesaphulelo esibalulekileyo
Imfazwe phakathi kweinshurensi kwiinyanga ezizayo iya kujikeleza ngesaphulelo esibalulekileyo ekuthengeni iApple Watch. Sisipho esifunwayo esinokubeka imali eseleyo xa ukhetha enye i-inshurensi okanye enye, kodwa ikwanceda umsebenzisi ukuba aphile ubomi obunempilo, ngokuhambelana nenjongo ephambili ye-inshurensi, ukuba siphila iminyaka emininzi. ESpain asikaboni sipho malunga noku. Kodwa i-inshurensi yaseMelika, UJohn Hancock, ugqibe kwelokuba ahlawule phantse yonke iwotshi yeApple, ekwazi ukufumana isixhobo nge $ 25.
Ke ngoko, ukuba uqesha i-inshurensi yobomiUnoku-odola uthotho lwe-Apple Watch 3 ngeedola ezingama-25. Kodwa eli xabiso lixhomekeke ekuzilolongeni rhoqo kangangeminyaka emibini.
UJohn Hancock, wenze isigaba sovavanyo ekusetyenzisweni nasekukhuthazeni iiwotshi zeApple, kangangeminyaka emibini. Iziphumo azinakuba ngcono: Abasebenzisi be-Apple Watch bandise umsebenzi wabo ngokwama-20%.
Le ndlela yoqobo yentlawulo imi ngolu hlobo lulandelayo: Isixhobo sifunyanwa nge- $ 25 kwaye kufuneka kuhlawulwe umrhumo osisigxina wenyanga ngokusisebenzisa. Ukuba kwenziwa rhoqo ukusebenza, iindleko zenyanga zi- $ 0
Ungayalela iApple Watch Series 3 (GPS) ngentlawulo ephantsi ye- $ 25 kunye nerhafu kwaye kule minyaka mibini izayo, iintlawulo zenyanga nganye zisekwe kwinani loqeqesho olugqityiweyo.
Ukuba uyasithanda isibonelelo kodwa ufuna imodeli ye-LTE, ungahlawula isongezelelo kwaye uyakubukela iApple.
Ukuza kuthi ga ngoku akukho nkampani yeinshurensi ekulindeleke ukuba ithengise isipho esifana neApple Watch eSpain. Kuyinyani ukuba intengiso yeinshurensi yobomi iphuculwe kakhulu eUnited States, xa kuthelekiswa namanye amazwe, njengeSpain. Nangona kunjalo, isenzo esifana nesi siya kwamkelwa kakuhle, nangona ngokuqinisekileyo, kwintengiso encinci izixhobo zinokubiza kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UJohn Hancock, i-inshurensi yokuqala yobomi yokuhambisa iApple Watch ngesaphulelo esibalulekileyo
I-Twitterrific 5 yeMac ifumana uhlaziyo lokuqala ngeendaba ezibalulekileyo
Ividiyo ebukelwe kakhulu kuYouTube, iDespacito, yahlelwa ngeFinal Cut Pro